तिजको कार्यक्रममा प्रबासी नेपाली सघ भारतमा प्रवेस गर्नेहरुको लहर ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	तिजको कार्यक्रममा प्रबासी नेपाली सघ भारतमा प्रवेस गर्नेहरुको लहर ! » Nepal Fusion
तिजको कार्यक्रममा प्रबासी नेपाली सघ भारतमा प्रवेस गर्नेहरुको लहर !
नयाँ दिल्ली प्रबासी नेपाली सघ भारत र अखिल भारत नेपाली एकता मंच सयुक्त ओखला नगर समितिले हरितालिका तिज २०७६ को अवसरमा सोमबार ओखला स्थित भव्य कार्यक्रम सम्पन्न गरेकोछ । सोमबारका दिन राजधानी दिल्ली तीजको लहरले तरंगित भएको छ । महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तिजको विशेष दिन हुनाले दिल्लीमा संघ संथाहरु द्वारा दर्जनौ कार्यक्रम अलग-अलग ठाउमा आयोजना गरिएको थियो ।
प्रबासी नेपाली सघ भारत र अखिल भारत नेपाली एकता मंच सयुक्त ओखला नगर समितिले यो भन्दा पहिला पनि संयुक्तरुपमा कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । तिजको अवसर पारी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा केही सदस्यहरुले पुर्व नेकपा एमाले समबद्द प्रवासी नेपाली संघ भारतमा प्रवेश समेत गरेका छन । प्रवेश गर्नेहरूमा नेपाली जनता र देशको मुक्तिका लागि 10 बर्ष जनयुद्ध र 62/63को जनआन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्भाह गर्दै आम निर्वाचनमा नेपालको जिल्ला कमिटी सदस्य, मोर्चा सगठनको सचीव लगायतका विभिन्न पदहरुमा काम गर्दै आइरहेका र हाल भारत प्रबासमा यातायात ब्यबसाय गर्दै आइरहेका कमरेड माईकल क्षेत्री प्रबासी नेपाली संघ भारतमा प्रवेश गरेका छन । साथै ओखला र कालकाजी देखी देबि सिल्वाल, रानी, मधु सिल्वाल , गिता अर्याल, सीता अर्याल र बिष्णुले समेत संघमा प्रवेश गरेका छन ।
तिजको अवसर पारी आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा प्रवासी नेपाली संघ भारत केन्द्रिय सचिवालय सदस्य असोक थापाको बिशेस पहल र अगुवाईमा सदस्यलाइ प्रवेस गराइएको हो । कार्यक्रममा अखिल भारत नेपाली एकता मंच केन्द्रिय कोष प्रमुख ज्ञान बहादुर केसी, अखिल भारत नेपाली एकता मंच केन्द्रिय सदस्य अर्जुन दयाल, मानु श्रेष्ठ, नगर अध्यक्षहरु एन बि थापा, शंकर शर्मा, सचिव शान्ति शर्मा, सदस्य अमृता थापा र राज्य सदस्य नरेश बोहरा लगयतको सहभागी रहेको थियो । नव प्रवासीहरुलाइ अबिर र दोसल्ला ओडाएर सम्मान सहित संघमा प्रवेश गराएका थिए ।